शब्दकोश: करिअर र हामी
'अहिले कहाँ रे तपाईँ ?' प्रश्न सुन्दा फोनबाट कसैले ठेगाना पछ्याउन खोजेको जस्तो लाग्छ । तर होइन । प्रत्यक्ष भेटमै पटकपटक यस्तो प्रश्‍नको सामना गर्नुपरिरहेको हुन्छ । 'कहाँ होउ आजकाल, पूरा व्यस्त ?'
औपचारिकता वा सद्‍भाववश साथीहरू हाल काम गरिरहेको थातथलो जान्न खोज्छन् । यो अस्वाभाविक होइन । खासमा हामी आजको पुस्ताको लागि करिअर यतिविघ्न महत्वपूर्ण छ कि यसको लागि परिवार समेतलाई दाउमा राखेर अघिल्तिर हुत्तिन हामी आतुर छौँ । यसकारण घरपरिवार र आपसको सन्चो-बिसन्चोभन्दा पनि अहिले कहाँ काम गर्दै हो भन्ने थेगोमा हामी अल्झिएका छौँ । करिअरले हाम्रो मन पिसिएर/भुटिएर तावामा छुटेर जलेको करेलाको मिहीन पाप्रो भएको छ र दिमाग मात्र भद्दा भएर जागिरहेछ ।
रुवाउने करिअर । हँसाउने करिअर । यही मझधारमा आजका युवाले जीवनको नाउ खियाइरहेछन् । यो खियाउनुसँगै उनीहरू आफैँ खिइँदै गएका त छैनन् ? खोइ, यसको हिसाब गर्ने कसले ? देशमा आज छ्वास्सछुस्स रुपमा युवा मन्त्रालयको कुरा उठिरहेको छ । असम्भव भन्ने के कुरा छ र, नयाँ सरकारले त्यस्तो नयाँ मन्त्रालयको व्यवस्था पनि गर्ला । तर त्यो युवा मन्त्रालय पनि कुनै एउटा युवा अनुहार भर्ती हुनमै सीमित भयो भने नयाँ नेपालको नयाँ विडम्बना उखान मात्र सही साबित हुनेछ । युवा मन्त्रालयको युवा मन्त्रीले आफ्नो करिअर बनाउनेछन्, बाँकी त ऐजन ऐजन... ।
जीवनमा हामी पढेरभन्दा परेर सिक्दै आउँछौँ । पढाइको कखराले नदिलाएको हातको मैला अनुभवको एकै झोकाले हत्केलाभरि भरिदिन्छ । र पनि हामी अपूरो बन्छौँ नियतिको गोलघरमा र 'करिअरको बेरियर' खोज्नमा आफूलाई हराउँछौँ । करिअर चाहिन्छ, समाजमा सहज भएर जीवनयापन गर्नलाई । सम्मानजनक स्थानको लागि । तर त्यही सबथोक होइन सायद । करिअरको दौडमा लछारपछार हुँदाहुँदै हाम्रा अन्य महत्वपूर्ण कुरा नछुटून् । पछि फर्किँदा केही नरहेको स्थिति नहोस् । सिबाय पछुतो र आँसुले पनि नपखालिने भुतभुते खरानीजस्तो आँखा । ओशोको चर्चित किताब 'अलोन वी क्यान फ्लाई' को भाव समाएर कुद्‌ने भए अर्कै कुरा ।
आज जे छन्, सबै तपाईँसँगै रहन सम्भव होस् ।
यो शुभकामना तपाईँलाई !
तपाईँको प्रिय साथीलाई !!
अनि मलाई पनि !!!
यति मात्र ।
मे १७, २००८ (नक्साल)
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, May 18, 2008
Labels: युवा पुस्ता
Katha byatha nabanos.katha kathai ko roopma rahayo vane dherai ramro hune thiyo. any way pirko vari bisayakoma dhanyabat6sale.